तिथि मेरो पत्रु » राशिफल साइन गरेर एक पहिलो तारीख मा के गर्न
पहिलो तिथिहरु सधैं कारण एक किसिम को लागि स्नायु-चालाकी छन्. तपाईं तारीख छ गर्न उत्साहित छौँ, र के को संभावित आउन, तर तपाईं राम्रो प्रभाव बनाउन चिन्ता. राम्रो प्रभाव बनाउन को भाग अन्य व्यक्ति आनन्द उठाउने एक मिति योजना अर्थ, तर त्यसो गर्न सक्छन् तपाईं कसरी तैपनि बारेमा धेरै थाहा छैन जब? तपाईं आफ्नो राशि चिह्न थाहा छ भने, तपाईं सिद्ध मिति योजना मदत गर्न भनेर उपयोग प्रयास. मा पढ्नुहोस्:
तपाईं एक Aries संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यो कार्य-भरे हुन गइरहेको छ भनेर निश्चित. एक Aries धेरै लामो समय को लागि अझै पनि बसिरहेका खडा हुन सक्दैन, र सबै कहिलेकाहीं कुरा गरिरहेको आवश्यकता. घरबाहिरै कडा गतिविधि गर्दै, पैदल यात्रा वा साइकल जस्तै, उनको लागि काम गर्न सक्छ. तपाईं भित्र बस्न चाहन्छन् भने, इनडोर पर्वतारोहण प्रयास. तपाईं ट्रान्जिट मा पनि धेरै समय खर्च बिना वा कुनै पनि एक ठाउँमा चाँडै अर्को मिति एक भाग जान वा तिनीहरू उपवास चासो गुमाउन छौँ सुनिश्चित – मिति पनि मा छ पहिले!
तपाईं एक Taurus संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूले सचेत शासन चिह्नको हुनुहुन्छ भनेर थाह, यति सचेत संलग्न गर्नेछन् भन्ने केहि राम्रो काम गर्छ गर्दै. धनी खाद्य पदार्थ छ कि एक राम्रो रेस्टुराँमा गएर, एक रक्सी टेस्टिङ उपस्थित, रात नृत्य खर्च, वा एक कन्सर्ट गर्न जाने. जहाँ तपाईं जान, Taurus लक्जरी माया गर्नुहुन्छ पैसा खर्च गर्न तयार. एक पृथ्वीमा चिन्ह हुनु, तिनीहरूले सडक रूपमा लामो कीडे एक धेरै वरिपरि छैनन् रूपमा एक राम्रो पिकनिक भएको मन छैन, त्यसैले यदि तपाईँ त्यसको बाटो जाने भने, केही Citronella मोमबत्ती ल्याउन.
तपाईं एक मिथुन संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, कहीं सुन्दर लिन, आकस्मिक, मान्छे को एक धेरै छन् जहाँ वरिपरि मानसिक उत्तेजित राख्न, र तपाईं जीवन्त कुराकानी कहाँ हुन सक्छ. तिनीहरूले चाँडै विषयहरू परिवर्तन गर्दा यो संग विषयहरू प्रकाश र रोल राख्नुहोस्. तिनीहरूले शोर वा साँच्चै व्यस्त छ कि कुनै पनि ठाउँमा आपत्ति छैन, एक क्लब जस्तै, र वास्तवमा जस्तै कि. तिनीहरू साहसिक कुराहरू जस्तै भन्न सक्छ, तर यो चिन्ह तिनीहरूले वास्तवमा भन्दा बढी साहसिक छौं सोच्छ, त्यसैले आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र को बाहिर पनि टाढा लिन्छन् छैन.
तपाईं एक क्यान्सर संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई थाह छ कि उनलाई कहीं ल्याउन, कहीं उनीहरूले पहिले भएको छु भनेर थाह. तिनीहरूले उनलाई सहज महसुस गर्न र आफूलाई तपाईं ढोका खोल्न अनुमति परिचित आँगन आवश्यकता. एक शान्त रेस्टुरेन्ट संभावना आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त छ, तिनीहरूले सान्त्वना खाना सेवा र couches सट्टा कडा मेच विशेष गरी भने. तिनीहरूले तपाईंलाई सहज बन्न समय धेरै छ त्यसैले पनि धेरै को दुई परेशान छैन वेटर बताएँ, र तपाईं को दुई भावनात्मक जडान गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं एक लियो संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यस नाटकको माया गर्नुहुन्छ भनेर हस्ताक्षर छ, त्यसैले एक चलचित्र वा थिएटर जा प्रयास. तपाईं फिल्म जाने भने, यो एक स्टार संग नवीनतम झटका छ सुनिश्चित, र तपाईं थिएटर जान भने, यो अहिले बाहिर त्यहाँ भन्दा शो छ सुनिश्चित. तिनीहरूले भीड संग महसुस गर्न मन, त्यसैले तिमी जहाँ पनि जान, यो एक गर्म स्थान बनाउन. तिनीहरूले भर्खरै सुपर खिलवाड को आदी हुनुहुन्छ भने तपाईं, तर सबैले तिमी संग संपर्क मा आउछन्, एक सानो डाह देखाउन स्वतन्त्र महसुस. तिनीहरूले वास्तवमा यो कुरा मन.
तपाईं एक कन्या संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, धेरै ठूलो वा आकर्षक केही गर्न छैन, र तिनीहरूलाई कहीं शोर वा व्यस्त लिन छैन. तिनीहरूले आफ्नो विचार सुन्न सक्नुहुन्छ जहाँ यो एउटा शान्त ठाउँ बनाउने. तिनीहरूले धेरै व्यावहारिक छौं, तपाईं FLAMBOYANT केही गर्न भने र यो प्राप्त हुन सक्छ, जतिसुकै रोमान्टिक तपाईं यो छ विचार. कन्या स्वास्थ्य चिन्ह छ, त्यसैले स्वस्थ खाद्य पदार्थ कार्य गर्दछ कि एक रेस्टुरेन्ट प्रयास, वा तिनीहरूलाई जिम जाने. निश्चित तपाईं आफ्नो असुरक्षित महसुस चाँडै शान्त बनाउन, विशेष गरी आफ्नो शरीर बारेमा, त्यसैले तिनीहरूलाई केही निष्कपट प्रशंसा तिर्न.
तपाईं एक तुला संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, एक कला संग्रहालय तिनीहरूलाई ले, कला ग्यालरी, वा कला प्रदर्शनी. यो सबैभन्दा कलात्मक अभिव्यक्ति कदर गर्नुहुन्छ भनी संकेत छ. तपाईं तिनीहरूलाई संग कलात्मक केहि गर्न सक्छन्, एक बर्तन गिलास वा glassblowing स्टूडियो गर्न जाने जस्तै. तिनीहरूले तपाईं संग केहि बनाउन को कार्य मन पराउनुहुनेछ. तपाईं पनि नवीनतम गर्न जाने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, सहरमा trendiest स्थान, यो एक रेस्टुरेन्ट हो कि, क्लब, वा पार्क. एक-मा-एक ध्यान जस्तै Libras, त्यसैले तपाईं मानिसहरूको बीचमा छौं भने पनि, तिनीहरूलाई आफ्नो नजर.
तपाईं एक वृश्चिक संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, अँध्यारो प्रकाश संग ठाउँमा छडी. तिनीहरू अन्धकारमा आकर्षित हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै दिन तिथिहरु. तिनीहरू पनि रात owls हुन सक्छ, यति अबेर सुरू मिति स्वतन्त्र महसुस. तिनीहरूले विज्ञान मन, त्यसैले तपाईं एक विज्ञान संग्रहालय प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, मान्छे को सबै भन्दा गएका छन् र तिनीहरूले तपाईं संग पूर्ण एक्लै हुन सक्छ विशेष गरी एक पटक. तिनीहरू पनि जीवन र वर्जित प्रजा को गाढा लाग्दैन, त्यसैले तपाईं कहीं सेक्स व्यवहार तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ भने, मृत्यु, वा रगत र हिम्मत, तिनीहरूले शायद ग्ली संग चिल्लाहट छौँ.
तपाईं एक धनु संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, एक साहसिक लागि खुला हुन. यो चिन्ह एक लहर मा कुरा गर्न प्रेम, त्यसैले तपाईं योजना जे शायद वास्तवमा यस्तो छैन. तपाईं ठीक बाहिर शुरू छौँ, तर त्यसपछि अन्य ठाउँका वीर, त्यसैले यो संग रोल. धनु अन्य संस्कृति र देशमा प्रेम, त्यसैले विदेशी भोजन कार्य गर्दछ कि एक रेस्टुराँमा लिन्छन्, र तपाईं एक यात्रा गर्न सक्छन् भने, यो के. यो नजिकै छ र चाहे तपाईं केही घण्टा रहन, वा तपाईं एक विमान मा हप र एक सागर पार, तिनीहरूले सवारी लागि छौं. केहि चरम पनि काम गर्न सक्छ, स्काइडाइविंग जस्तै.
तपाईं एक मकर संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं गर्न सक्छन् परम्परागत रूपमा यो बनाउन. खाना र एक फिलिम चिन्ह संग एक-ठीक छ. तिनीहरू सान्त्वना क्षेत्र को बाहिर धक्का भइरहेको रुचि छैन, र उनि पहिले देखि नै राम्ररी थाहा छ के गर्न चाहनुहुन्छ. तिनीहरूलाई लागि सामान्य छ, छडी र पागल टाढा रहन. तपाईं सफल को कहाँ धेरै एक रात्रिभोजमा तिनीहरूलाई लाग्न सक्छ भने, महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हुनेछन्, कि तपाईं केही गम्भीर अंक स्कोर छौँ. तिनीहरूले सामाजिक भर्याङ माथि मान्छे संग hobnob गर्न प्रेम.
तपाईं एक Aquarius संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं गर्न सक्छन् यसलाई असामान्य बनाउन. यो चिन्ह उनि सामान्य गर्न चाहन्छु केहि देखि असामान्य र विभिन्न कुरा प्रेम, तपाईं गर्न सक्छन् त आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र को बाहिर जहाँसम्म धक्का. तिनीहरू पनि एक समूह मिति मा आरामदायी छौं, प्रायः तिनीहरूले आकस्मिक राख्न प्रयास त्यसैले तिनीहरू पहिलो तपाईं साथी हुन चाहन्छु किनभने. पर्यावरण-अनुकूल हो कि ठाउँमा जानुहोस्, रीसाइक्लिंग मा ठूलो, वा सँगै केही मानवीय काम गर्न सक्छ जहाँ, सोतरको उठाएर जस्तै, रासनको स्वयम्सेवा, वा एक दान खाने गर्न जाने.
तपाईं एक मीन संग डेट मा जाँदै हुनुहुन्छ भने, यस चिन्ह सुपर रोमान्टिक छ भनेर थाह, कुनै पनि अन्य भन्दा शायद अधिक, त्यसैले तिनीहरू कुनै पनि sappy हाउभाउ कदर गर्नेछौं. तपाईं serenaded हुनुहुन्छ र एक स्ट्रिङ चौकडी समुद्र तट मा एक पैदल लागि सँगसँगै जहाँ एक रोमान्टिक खाने तिनीहरूले प्रेम चाहन्छु कुरा हो. मीन पानी प्रेम गर्दछ, तपाईं पानी विचार छ जहाँ ताकि तपाईं एक रेस्टुराँमा जान सक्नुहुन्छ. तिनीहरू पनि संगीत प्रेम, त्यसैले एक कन्सर्ट प्रयास, सिम्फनी, वा नृत्य बाहिर जाने. तिनीहरू साँच्चै बस तपाईं नजिक हुन चाहनुहुन्छ. Oddball विकल्प? चिडियाघर. तिनीहरूले जनावर प्रेम.